Kyanite Orange, si Tanzania / Ụcha / Manganese (Mn3 +) / Video
Kyanite Orange, si Tanzania
Tags Kyanite Orange
Kyanite bụ a a na-acha anụnụ anụnụ silicate ịnweta, ọtụtụ ndị na-hụrụ na aluminum-ọgaranya metamorphic pegmatites na / ma ọ bụ sedimentary nkume. Kyanite na metamorphic nkume n'ozuzu na-egosi nsogbu dị elu karịa anọ kilobars. Ọ bụ ezie na ike nwere ike mụ na ala nsogbu na ala okpomọkụ, ọrụ nke mmiri na-abụkarị elu ezu n'okpuru ọnọdụ ndị dị otú ahụ na ọ na-anọchi hydrous aluminosilicates dị ka muscovite, pyrophyllite, ma ọ bụ kaolinite. Kyanite na-mara dị disthene, rhaeticite na cyanite.
Kyanite bụ onye so na aluminosilicate usoro, nke na-agụnye ndị polymorph andalusite na polymorph sillimanite. Kyanite bụ ike anisotropic, na na ya ekweghị ekwe dịgasị dabere na ya crystallographic direction. Na kyanite, a anisotropism nwere ike-atụle ihe e ji mara.
Na okpomọkụ n'elu 1100 ° C kyanite erekasịchaala n'ime mullite na vitreous silica via ndị na-esonụ mmeghachi omume: 3 (Al2O3 · SiO2) → 3Al2O3 · 2SiO2 + SiO2. Mgbanwe a na-eweta ihe mgbasa.
Aha ya na-abịa site otu si dị ka na nke agba cyan, na-ewepụtara Ancient okwu Grik κύανος. Nke a na-n'ozuzu sụgharịrị English dị ka kyanos ma ọ bụ kuanos na pụtara "anụnụ anụnụ".
A na-eji Kyanite dị ka nkume dị elu, nke nwere ike igosipụta ihu ọma nke cat, ọ bụ ezie na njirisi ya na njedebe zuru okè na-ejedebe ya. Ụdị agba na-agụnye n'oge na-adịbeghị anya kyanite oroma si Tanzania. Epe oroma bụ n'ihi nsonye nke manganese (Mn3 +) dị na nhazi ahụ.
Okpokoro Kyanite, kristal columnar na-abụkarị ihe dị mma nke mbụ gosipụtara ịnweta, yana agba ya (mgbe ihe nhicha ahụ bụ acha anụnụ anụnụ). Mmekọ mineral ndị metụtara ya bara uru, karịsịa nke ọnụnọ nke polymorphs nke staurolite, nke na-emekarị na kyanite. Otú ọ dị, àgwà kasị baa uru n'ichepụta kyanite bụ ihe anisotropism. Ọ bụrụ na onye na-enyo enyo na ihe atụ nke ga-abụ kyanite, na-egosi na ọ nwere ike abụọ dị iche na axis perpendicular bụ isi maka njirimara, ọ nwere ike nke 5.5 yiri 001 na 7 yiri 100}